रुसी पक्षको ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको दाबी ! – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured रुसी पक्षको ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको दाबी !
बेलायतका गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनको दोनेत्स्क क्षेत्रको युद्धमा ठूलो संख्यामा रुसी र रुसी ‘प्रोक्सी’ फौज हताहत भएका छन् । उनीहरूको अनुमान अनुसार दोनेत्स्क छापामारले मात्रै आफ्ना ५५ प्रतिशत सक्कली फौज गुमाएको छ ।
युक्रेनी नेताहरूका अनुसार रुसी फौज लिसिचान्स्क सहरलाई घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले लुहान्स्कको सम्पूर्ण भूभाग कब्जा गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । क्षेत्रीय प्रमुख सर्हिय हाइदाइले यस सहरमा भयानक विनाश भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सेभेरोदोनेत्स्क सहरको स्थिति अझै खराब रहेको र त्यहाँ करिब सातदेखि आठ हजार सर्वसाधारण अलपत्र अवस्थामा छन् ।
बेलायती सैनिक गुप्तचर निकायले दोनेत्स्क र लुहान्स्क मिलेर बनेको युक्रेनको पूर्वी दोन्बास क्षेत्रमा रुसले ठूलो संख्यामा जगेडा फौज तैनाथ गर्ने संभावना धेरै रहेको बताएको छ ।
स्वघोषित दोनेत्स्क जनगणतन्त्रको मानव अधिकारवादी संस्था ओम्वुड्सम्यानले रुसी पक्षको २ हजार १ सय २८ फौज मारिएको, ८ हजार ८ सय ९७ जना घाइते भएको र थप ६ सय ५४ जना सर्वसाधारणको पनि ज्यान गएको जनाएको छ ।
मंगलबार युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले लुहान्स्कको स्थिति निकै त्रासदीपूर्ण रहेको, रुसी फौजले दोनेत्स्कमा पनि दबाब बढाइरहेको बताएका थिए । यसैगरी बुधवार रुसी फौजले दक्षिणी सहर माइकोलाइभमा सातवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ ।
संसद्ले ठूला र दूरदर्शी निर्णय गरेको छ : प्रधानमन्त्री देउवा
वामदेव ओली भेट्न बालकोट पुगे
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले लिए शपथ
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ चढेको गाडी ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो
लुम्बिनी प्रदेशमा पानी परेपछि धमाधम रोपाइँ
कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेको अवरोध जारी